Hello Nepal News » पहिलोपटक गोल्डेन बुट जित्दै लेवान्डोस्की : टक्कर दिन सक्ने कोही छैन !
पहिलोपटक गोल्डेन बुट जित्दै लेवान्डोस्की : टक्कर दिन सक्ने कोही छैन !
जर्मन क्लब बार्यन म्युनिखका स्टार फरवार्ड रोवर्ट लेवान्डोस्कीले सिजन २०२०–२१ को युरोपियन गोल्डेन बुट जित्ने करिब–करिब पक्का भएको छ । ताजा अवस्थामा उनले लिगमा ३५ गोल पूरा गरेका छन् । गत राति बुन्डेसलिगामा स्टटगार्टविरुद्ध मात्रै २३ मिनेटको बीचमा ३ गोल गरेपछि यो सिजन उनले गरेको कूल लिग गोल संख्या ३५ पुगेको हो, जुन अन्य कुनै पनि खेलाडीको भन्दा बढी हो । यो सिजन लिगमा ३० गोलको आँकडा पार गर्ने लेवान्डोस्की एक मात्रै खेलाडी हुन् । अन्य खेलाडी उनको छेउछाउ पनि छैनन् । गोल्डेन बुटको दौडमा अहिले उनलाई टक्कर दिन सक्ने कोही छैन भन्दा पनि हुन्छ ।
लेवान्डोस्कीले यो सिजन बुन्डेसलिगामा मात्रै २५ खेल खेल्दै ३५ गोल पूरा गरेका हुन् । उनले ३५ गोलका साथै ६ गोलमा असिस्ट पनि प्रदान गरेका छन् । उनी २५ खेलबाट लिगमा यो सिजन सोझै ४१ गोलमा सामेल भएका हुन्, जुन निकै शानदार तथ्यांक हो । ३२ वर्षका लेवान्डोस्कीले पछिल्ला चार खेलका बीचमा मात्रै दुई ह्याट्रिक गरेका छन् । अघिल्लो साता मात्रै उनले बोरुसिया डर्टमुन्डविरुद्ध पनि ह्याट्रिक गरेका थिए । त्यसपछि गत राति पनि उनले अर्को शानदार ह्याट्रिक गर्दै गोल संख्या ३५ बनाएका हुन् । हालकै अवस्थामा लेवान्डोस्की युरोपियन गोल्डेन बुट दौडमा एक्ला दाबेदार देखिएका छन् ।
लेवान्डोस्कीपछि दोस्रो स्थानमा इटालियन क्लब युभेन्टसमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो छन् । उनले यो सिजन सिरी ए लिगमा २३ खेलबाट २३ नै गोल गरेका छन् । हालकै अवस्थामा रोनाल्डोभन्दा लेवान्डोस्की ठीक १२ गोलले अघि छन् । आज राति युभेन्टसले आफ्नो खेल बेनेभेन्टोसँग खेल्दा सो खेलमा रोनाल्डोले गोल गरे माथि उल्लेखित तथ्यांक फेरबदल हुनेछ । रोनाल्डोपछि तेस्रो स्थानमा स्पेनिस बार्सिलोनाका लिओनल मेस्सी छन् । मेस्सीले यो सिजन ला लिगामा हालसम्म २५ खेलबाट २१ गोल गरेका छन् । यही अस्थामा लेवान्डोकीलाई रोनाल्डो र मेस्सी भेट्ने सम्भावना छैन । यदि लेवान्डोस्कीले सिजनका बाँकी खेल नखेले मात्रै त्यो सम्भव हुन सक्छ ।
तर, २५ खेलबाट ३५ गोल गरेका लेवान्डोस्कीको टिमले बुन्डेसलिगामा अझै ८ खेल खेल्नै बाँकी छ । यदि लेवान्डोस्कीले यी ८ वटा सबै खेल खेले र अहिलेकै गतिमा गोल गर्दै गए यो सिजन उनले ५० गोलको आँकडा पार गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ । यदि एक वा दुई खेलमा विश्राम लिए पनि उनले ४५ गोल त सजिलै पूरा गर्ने देखिन्छ । लेवान्डोस्कीले गत सिजन कूल ३४ गोल गरेका थिए । गत सिजन उनलाई गोल्डेन बुट दौडमा अन्तिम समयमा इटालियन लाजियोका सिरो इम्मोबिलेले पछि पारेका थिए । तर, यसपटक लेवान्डोस्कीलाई पछ्याउन वा टक्कर दिन सक्ने यही अस्थामा कोही पनि देखिँदैन ।
युरोपका अन्य शीर्ष लिगमा ३८ खेलको लिग हुन्छ । तर, बुन्डेसलिगामा मात्रै ३४ खेल हुने हुँदा अन्य लिगका खेलाडीको तुलनामा यस लिगमा खेलाडीको गोल सधैं कम हुने गर्छ । जस्तो कि, यसपटक लेवान्डोस्कीले यही गतिमा अघि बढ्ने हो भने र लिगमा ३८ खेलसम्म हुनु हो भने उनले ५५ गोलको आँकडा सजिलै छुन सक्थे । तर, ३४ नै खेल हुने भए पनि उनले अझै पनि सबै खेलमा सहभागी हुँदै गए सिजन सकिँदासम्म ५० गोल पूरा गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ ।
प्रकाशित मिति ८ चैत्र २०७७, आईतवार ०७:३६